Ezigbo ego ejiri sie ike na 2021. Ego kachasị mma iji tinye ego.
Onu ogugu di iri abuo kachasi ike karia ya na onu ahia nke uru n'ime afo gara aga.
Ego ego di nma
Pasent percent maka otu afọ
Ihe kacha dị ntụkwasị obi bụ ego na ebe nrụọrụ weebụ cryptoratesxe.com, nke na-egosiputa oke ego ego na mgbanwe mgbanwe ego na ike dị ala.
Ọrụ ntanetị "ego ego kachasị ịtụkwasị obi" na-eji ụzọ niile emepere emepe si mgbanwe mgbanwe ego ego ma na-eme ọkwa nke ego ego ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na ozugbo.
Ihe a pụrụ ịtụkwasị obi na ego ego bụ crypto, nke ogologo oge na-egosi ezigbo mmụba kwụsiri ike. Mgbanwe dị na ọnụahịa ahụ dị obere ma ọ bụghị isi. Suchdị ego ahụ, dịka iwu, gosipụtara obere mkpụrụ akwụghị ọtọ. Ihe ize ndụ nke itinye ego na ego ego a pụrụ ịdabere na ya dị ntakịrị.
Egosiputa ego ego kacha adabara na ntukwasi obi na ntukwasi obi.
N'adịghị ka ọrụ "Ego dijitali kwesiri ntukwasi obi", nke na-egosi nkwụsi ike nke uto ziri ezi nke ọnụego ego ego, Ego di omimi di nma ọrụ na-egosiputa ego ego na ọnụego ọnụego ego ego kachasị maka oge nyocha.
Ego nke ego ego kachasị mma na-agbanwe na ntanetị, ebe ọ bụ na ahia na mgbanwe ego ego na-aga n'ihu, ọnụego ego ego na-agbanwe kwa mgbe.
Jiri ọrụ "kacha ịtụkwasị obi crypto" na ntanetị na n'efu.
Ego ego kacha tụkwasịrị obi maka 2021
Edepụtara ndepụta ego ego nke a pụrụ ịdabere na ya maka $year site na nhọrọ nke 10 crypto n'usoro n'usoro site na nke kacha bụrụ ndị a pụrụ ịdabere na ya, na ibelata usoro nke ntụkwasị obi.
Elidabere na ya enweghị njirimara ya, yana iji ya tụnyere ego ego, anyị gosipụtara ozi dịka pasent nke mmụba karịa afọ gara aga.
A gosipụtara ọkwa nke ego ego kachasị ịtụkwasị obi maka 2021. Ndị ọrụ anyị na-enyocha ike na uru dị n'ọrụ ego ndị a.
Gaa na webụsaịtị anyị ma jiri ọrụ kacha dị elu ego ego maka 2021.
Ebe nchekwa ego ego dị mma maka 2021 bụ ọrụ ntanetị anyị n'ịntanetị n'efu, nke gosipụtara nchebe kachasị, n'echiche anyị, ego ego nke ị nwere ike itinye ego itinye ego n'enweghị nsogbu.
Anyị na-enyocha nchekwa nke ego ego site na nkwụsi ike ma ọ bụ ike. Anyị na-atụle nchekwa ego ego na-anaghị ekwe ka mbelata nke ukwuu, ọbụladị na emebi mmebi nke ike. Site na esemokwu mgbanwe ego ego ego kwụ ọtọ, o kwesịrị igosipụta nkwụsi ike site na afọ ruo n'afọ nke na itinye ego na ya na-akwụghachi ụgwọ.
Nhọrọ nke cryptos dị mma, ọnụ ahịa ha na ikike ha gosipụtara maka 2021. Ọnụahịa na ike mgbanwe ọnụego mgbanwe crypto nwere ike ịgbanwe kwa ụbọchị na ọkwa anyị kachasị elu "Ego di omimi di nma 2021" kwa ụbọchị.
Ego ego ya na uto siri ike na obere volatility.
Ego ego na nkwụsi ike na obere volatility bụ otu n'ime ihe ndị a pụrụ ịdabere na ya.
Nkwụsi ike kwụsịrị crypto bụ ihe dị mma na nke a maka oge ịkọ akụkọ dị iche iche anyị na-ahụ uru mgbe niile. Otito kwụsiri ike na-akwado itinye ego na crypto ogologo oge ma ghara ire ego na obere oge.
Obere volatility fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na nkwụsi ike ma gosipụta na ọ bụghị ihe ịtụnanya itinye ego na crypto dị otú ahụ maka obere oge.
Maka obere ego, ịkwesịrị ịchọ ego na volatility dị elu iji jide ọnụego ọnụ ọgụgụ kachasị elu ma ree uru ego ego.
A crypto nwere obere volatility na nnukwu kwụsie ike kwesịrị ekwesị maka itinye ego ogologo oge, ikekwe ruo ọtụtụ afọ.
Tebụl nke ego ego kachasị ntụkwasị obi na ntụkwasị obi.
Tebụl nke ego ego kachasị ntụkwasị obi ma dị nchebe - jiri anya na-egosipụta ọkwa dị elu nke ego ego kachasị ntụkwasị obi.
N'ime tebụl crypto kachasị mma ị nwere ike ịhụ aha ego crypto na ọnụego mgbanwe ya na dollar US.
Mgbe ị pịrị n’otu n’ime ntụkwasị obi ego ego dị na tebụl, a ga-atụgharịgharị gị na peeji nke ahụ na ozi zuru ezu banyere ọnụego mgbanwe ego a.
Chaatị nke ego ego nke ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na ntụkwasị obi.
Chaatị nke ego ego nke ntụkwasị obi kacha sie ike bụ ngwa ọzọ dị n'ịntanetị nke gosipụtara ọkwa dị elu nke ego ego kachasị ịtụkwasị obi.
Ihe eserese nke ego ego ego kacha gosiputara gosiputara onodu nke onu ahia nke iri kacha elu crypto nke nche ulo oru kachasi elu dika echiche anyi si di.